8Al + 3 Fe3O4 → 4Al2O3 + 9 Fe
aluminium Amooniyam perchlorate; Cusbada Hymonchloric acid ammonium aluminium oksaydh biyaha koloriin koloriin nitrogen
(rnn) (rnn) (rnn) (lng) (kh)
(Trang BAC) (trung) (trung) (xoog leh) (xoog leh)
10 6 5 9 6 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 10Al + 6NH4ClO4 → 5Al2O3 + 9H2O + 6HCl + 3N2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al (aluminium) uga falcelisa NH4ClO4 (Ammonium perchlorate; Hyperchloric acid ammonium salt)?
Xalka: caag butyl
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo H2O (biyaha) iyo HCl (hydrogen chloride) iyo N2 (nitrojiin)?
Al wuxuu la falgalayaa NH4ClO4
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa NH4ClO4 (Ammonium perchlorate; Hyperchloric acid ammonium salt)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 10Al + 6NH4ClO4 → 5Al2O3 + 9H2O + 6HCl + 3N2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NH4ClO4 (Ammonium perchlorate; Hyperchloric acid ammonium salt)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee NH4ClO4 (Ammonium perchlorate; Hyperchloric acid ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH4ClO4 (Ammonium perchlorate; Hyperchloric acid ammonium salt) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Al2O3 (Ammonium perchlorate; Hyperchloric acid ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jidheed ee H2O (Ammonium perchlorate; Hyperchloric acid ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee HCl (Ammonium perchlorate; Hyperchloric acid ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HCl (hydrogen chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee N2 (Ammonium perchlorate; Hyperchloric acid ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh N2 (nitrogen) badeecad ahaan?
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Haa
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al (aluminium) uga falcelisa SiO2 (silikon dioxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Al2O3 (aluminium oxide) iyo Si (silicon)?
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa SiO2 (silicon dioxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Haa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3 Fe
Waa maxay xaaladda falcelinta Al (aluminium) kaga falcelisa FeO (iron(ii) oxide)?
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa FeO (iron(ii) oxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 3FeO → Al2O3 + 3 Fe
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Al2O3 (iron(ii) oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2O3 (aluminium oxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe (iron(ii) oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe (birta) badeecad ahaan?